यो वर्ष अन्तिम पटक डिभी खुल्दै, यस्तो छ नयाँ नियम - Internet Khabar
यो वर्ष अन्तिम पटक डिभी खुल्दै, यस्तो छ नयाँ नियम
September 18, 2017 Internet Khabar Desk
काठमाडौं । अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा चुनाव जितेसँगै डिभी भिसा बन्द हुने चर्चा चलेको थियो।
तर यो वर्ष अन्तिम पटक डिभी खुल्ने भएको छ । अमेरिकाले यो वर्ष अन्तिम पटक डिभि खोल्ने तयारी गरेको हो । र, यसपालीको डिभी आवेदनमा केही नयाँ नियमहरु पनि समावेश गरिने छ ।
अक्टोवर तीस अर्थात असोज १७ गतेका दिन डिभी खुल्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले डिभी खुल्ने बारेमा एक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ।
अमेरिकाले डिभी भिसाका नियममा उल्लेख परिवर्तन भने नगरेको जनाएको छ। तर यसपालीको डिभि भिसा अन्तिम म्याद नोभेम्वर सात भन्दा अघि नै भर्न स्टेट डिपार्टमेन्टले अनुरोध गरेको छ।अन्तिम समयमा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ । त्यसैले तपाईं पनि डिभि भर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने खुलेको केही समयमै भरिहाल्नुपर्ने छ।
साथै यो वर्षको डिभिको नतिजा मे महिनाको पहिलो हप्ता नै प्रकाशन गर्ने अमेरिकाले जनाएको छ । २०१८ को अक्टोबरमा डिभि पर्नेहरुले भिसा पाउने छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सदनमा डिभी बन्द गर्ने विधेयक पेश गरेका छन् । त्यो पास हुने क्रममा रहेकोले यो वर्ष डिभी खुल्ने भएको हो । अर्को वर्षदेखि डिभी बन्द हुने छ । अमेरिकी सदनमा डोनाल्डकै पार्टीको बहुमत रहेको छ । उनको पार्टी पहिले देखिनै डिभी भिसाको विरोधमा रहेको थियो । त्यसैले यो वर्ष डिभी परेन भने डिभी सपना पनि अन्त्य हुने देखिएको छ ।
डिभी कसरी भर्ने ?
अनलाइनमा उल्लेख भएको फोटो सम्बन्धी नियमलाई पूर्णत पालना गर्नुपर्ने छ । डिभी भर्नका लागि फोटो खिच्दा चस्मा समेत लगाउनु हुँदैन । डिभी भरेपछि आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर भने सुरक्षित राख्नुपर्छ । यही नम्बरका आधारमा तपाईंलाई चिट्ठा पर्यो कि परेन भन्ने थाहा हुन्छ ।
डिभी भर्नका लागि www.dvlottery.state.gov मा लगइन गरी डाइभर्सिटी भिसामा गएर अनलाइन फर्म भर्न सकिने छ । यस्तै डिभी भर्दा २१ वर्ष भन्दा मुनिका सन्तान भए उनीहरुको पनि सम्पूर्ण विवरण भर्नु पर्ने दुतावासले जानकारी दिएको । डिभी फर्म भर्दा पर्छ कि भनेर धेरै पटक डिभी फर्म भरेमा त्यस्तो फर्म रद्द हुनेछ । यस्तै डिभी फर्म भर्दा अघिल्लो पटक प्रयोग भएका फोटाहरु राखेर डिभी भरेमा वा चस्मा लगाएको फोटो राखेर डिभी भरेमा त्यस्ता उम्मेद्वार अयोग्य हुने पनि दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
डिभी भरिसकेपछि आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ। पछि डिभी प¥यो कि परेन भनेर चेक गर्न कन्र्फमेसन नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ। तपाईंलाई डिभी प¥यो भन्दैमा अमेरिका पुगिहालिन्छ भनेर ढुक्क पनि नहुनु होला। तपाइसँग भएका योग्यता तथा अमेरिकी आप्रवासी कानुन बमोजिको योग्य छ कि छैन यो सबै चेक गरेपछि मात्र अमेरिका पठाउने निर्णय दूतावासले गर्छ। आवेदन दर्ता गर्दा आवेदकहरूले आफ्नो इमेल ठेगाना समेत दिनुपर्ने हुन्छ।
होसियार ! नेपालमा सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको जोखिम उच्च
दिपक लिम्बुको प्रेममा रहेकी गायिका मिलन अमात्यले गरिन् पतिसँग डिभोर्स
९३ देशका २९३ खेलाडीलाई उछिन्दै नेपालकी धाविका सुनमायाले जितिन् उपाधि
लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई दोस्रो चरणको तालमेलमा सकस
नेपाल र भारतबीच तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर
छोराकै साथीबाट पोखरामा ७० बर्षकी बृद्धा बलात्कृत, जसले गरिन यस्तो बिलौना ! (भिडियोसहित)
कञ्चनपुरमा फेरि बढ्यो भारतीय एसएसबीको हस्तक्षेप
मधेस समस्या समाधानको लागि संविधान संशोधन आवश्यक – अध्यक्ष गच्छदार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक – मन्त्री अधिकारी
माग पूरा गर्ने कम्पनीको आश्वासनपछि मलेसियाका नेपाली कामदार काममा फर्किए
चायाबाट सजिलै मुक्तिः यी हुन् १० घरेलु उपाय
December 5, 2015	 0	दुर्घटनामा प्रहरी हवल्दारको मृत्यु
बाढीले बाँध भत्काउन थालेपछि सिरहाका स्थानीयवासी त्रसित
June 12, 2018	 0	खेलबाट देशलाई चिनाउन सकिन्छ-उपाध्यक्ष ढकाल